Dowladda Turkiga Oo amartay in lasoo xiro mas’uuliyiin katirsan Maamulka Aala-Sucuud. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Turkiga Oo amartay in lasoo xiro mas’uuliyiin katirsan Maamulka Aala-Sucuud.
On Dec 5, 2018 36 0
Wariye Jamaal Khaashqoji.
Labadan mas’uul ayaa waxaa horey loogu eedayay iney mas’uul toos ah ka ahaayeen dilkii wariye Jamaal Khaaashiqji, waxaana markii ay soo baxday fadeexadaas uu boqorka Aala-Sucuud uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaaday.
Weli dowaldda Turkiga waxay daba taagantahay qadiyadda Jamaal Khaashiqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda maamulka Aala-sucuud ee magaalada Istanbuul, waxaana la ogaaday in Muxamad bin Salmaan uu yahay qofka bixiyay amarka lagu dilay wariyahaas.